Iraniana Mandrindra Hetsika Manerantany ho Fanohanana ny Fifanarahana ara-Nokleary amin’i Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2015 3:52 GMT
Mpanohana ny fifanarahana nokleary mitazona afisy mitondra teny ho amin'ny filaminana ho entin'ny fifanarahana. Sary nalaina avy amin'ny pejy Facebook #SupportIranDeal
Nisy vondrona tanora 10 ka hatramin'ny 15 manao ny fanamiana t-shirt an'ny Israeli Defence Force (IDF na Tafika Isiraeliana) sady manofahofa ny saina Kanadiana, Isiraeliana ary an'ny IDF mihodidina tsimoramora ny vondrona iraniana mitazona ireo sora-baventy mivky hoe “#SupportIranDeal” (Tohano na Manohana ny Fifanarahana Iraniana) sy ny “we choose peace” [mifidy ny fandriampahalemana izahay].
Mbola vao nanomboka ny fandrindran'ny vondrona iraniana ny fihaonamben'ny 15 aogositra, vao teo ampamoahana ny saina mampiseho ny sary famantaran'ny #SupportIranDeal ahitana domohina sy sampan'oliva, sady mamorona afisy goavana. Tany Toronto izany, iray ami'ny faritra anjatony nikarakara fihaonana ho fanohanana ny fifanarahana ara-nokleary teo amin'i Iran sy ny P5+1 nosoniavina tamin'ny 14 jolay.
Ireo vondron'olona nanatona dia manana afisy mivatsy hafatra tahaka ny hoe “Esory ny sarontavan'i Obama. Obama manohana ny Kalifa. Jihad mandady tsimoramora io” ary ny “Izay tsy miraharaha ny tantara dia voaozona ny hamerina azy indray”, mampifanandrify ny sarin'ny fifanarahana ara-nokleary iraniana amin'ny fifanaovan'i Adolf Hitler sy Neville Chamberlain sonia isian'ny fitoniana tamin'ny 1938.
Manatona ny vondron'olona iraniana mitondra ny voromailala sy ny sampan'oliva ry zareo no sady mihiaka hoe “ajanony ny mpampihorohoro” sy ny “mpamono olona ireo”.
Mpanohitra ny fifanarahana manofahofa ny saina kanadiana isiraeliana ary IDF mihodidina ny fanombohan'ny fihaonana #SupportIranDeal tao Toronto. Sary navoakan'ny mpanoratra.
Niditra an-tsehatra ny polisy hametraka sakana manelanelana ny ankolafy mifanohitra, saingy tsy talohan'ny hiakan'ny Iraniana hoe “fandriampahalemana, fandriampahalemana, fandriampahalemana” ho setriny.
Io no miforitra kely tamin'ny hetsika an-jatony notontosaina tamin'ny toerana isan-karazany manerana izao tontolo izao tamin'ny Asabotsy. Araka ny famoahana an-gazety napetraky ny mpanao gazety Negar Mortazavi tao amin'ny pejy Facebook #SupportIranDeal Worldwide, nahangon'olona bebe kokoa ny hetsika teny ifotony ho setrin'ny feo mihamiakatra ho fanoherana ny fifanarahana.
Tamin'ny 15 Aogositra 2015, Andro Iraisampirenen'ny Fandriampahalemana ao Iran, olona an'arivony no nanao fihetsiketsehana tany amin'ny tanàndehibe maro manerana izao tontolo izao ho fanehoana fanohanana ny fandriampahalemana sy fisorohana ady iray hafa ao afovoany atsinanana. Hetsika ifotony nokarakarain'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ampolony amin'ny tanàndehibe maherin'ny 100 tao amin'ny firenena 20 amin'ny kaontinanta 4 izany. Mpilatsaka an-tsitrapo anjatony, tsy mpikambana amina fikambanana na vondrona no nanatevin-daharana ity hetsika ifotony ity.
Mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony manerantany no nanao fihetsiketsehana mba haneho fanohanana ny fifampiraharahana ara-nokleary manatantara tamin'i Iran, izay mahatonga izao tontolo izao sy ny Afovoany Atsinanana ho toerana azo antoka kokoa, manome vonjy avy amin'ny fanasaziana henjana mianjady amin'ny Iraniana olon-tsotra, ary mamerina indray ny fifandraisana mitandro ny fandriampahalemana eo amin'i Iran sy i Etazonia. Mitranga izany raha mandany vola an-tapitrisany dolara ho fanentanana ho amin'ny famonoana ity fifanarahana ity sy ny famonoana ny fikarohana fandriampahalemana maharitra ireo vondron'olona mpanao lobbies mpankasitraka ady ao Etazonia.
Nandritra ny herinandro vitsivitsy nialoha ity hetsika amin'izao fotoana izy no nampielezan'ireo mpanohana fatratra sy teny faneva sy ny sary famantarana.
Nandray fanamarihana amin'izany mihitsy moa y mpikambana iray avy amin'ny ekipa diplaomatikan'i Etazonia Marie Harf tao amin'ny sioka iray nandritra ny fifandresendahatra:
Tsy fantatro mihitsy hoe iza no nanao izao fa karazany tena mampihiratra ny maso mihitsy.
Tao amin'ny governemanta iraniana, Massoumeh Ebtekar, Filoha Lefitra sady filohan'ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny fitondran'i Rouhani, nametraka rohy iray tao amin'ny hetsiky ny pejy Facebook.
Ninatso ny fanohanana ny fifanarahana i Ebtekar eo imason'ny mpanohitra avy ao amin'ny kongresin'i Etazonia sady “Zionista”.
Indro ny fantina avy amin'nysioka tamin'ireo tanàna nahitana fivorian'olona ho fanohanana ny fifanarahana :
Ankehitriny izahay mampita ny fanilo amin'ny tanàna manerana ny glaoby hanohy ny [Fanohanana Fifanarahana amin'i Iran]
Fivorian'olona ho fanohanana ny fifampiraharahana amin'i Iran eo anoloan'ny Trano Fotsy